ललिता निवासमा कुन बैंकको कर्जा कति ? (सुचीसहित) - Arthapage
ललिता निवासमा कुन बैंकको कर्जा कति ? (सुचीसहित)
बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब बढी ऋण दिएको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न बिरुद्द मुद्दा दायर गरेपछि बैंकहरुले दिएको ऋणबारे खुलासा भएको हो ।
यसरी बैंकले राखेको धितो बैंकलाई फिर्ता नहुने अवस्था आए सोहि बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चैत्र मसान्तसमको समय दिने र सो अवधिसम्म धितो फिर्ता आउने अवस्था नभए ऋण बराबर कै रकम प्रोभिजन गर्नको लागि निर्देशन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
यद्यपि यसबारे टुंगो भने लागि सकेको छैन । तर प्रोभिजन भने गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंक बताउछ । ति अधिकारीले भने ु जुन धितो राखेर ऋण दिइएको छ, सो जग्गा सरकारको नाममा गए धितो नै रहदैन, धितो नै नभएपछि प्रोभिजन गर्नुपर्यो निु ।
प्रकाशित मितिः 9:21:22 AM |
Prevनेपालगन्ज भित्र अचानोको भरमा खुलेका मासु पसल छ्यापछ्याप्ती, अनुगमन गर्ने निकाय चुपचाप
Nextहिसान कप फुटवल प्रतियोगितामा जिभिएन कलेज फाईनलमा पुग्यो